Motorola Athena ayaa ku daatay Snapdragon 662 iyo 4 GB RAM | Androidsis
Motorola Athena wuxuu u muuqdaa mid udub dhexaad u ah Snapdragon 662: dhawaan ayuu suuqa soo gali doonaa
Motorola waxay isu diyaarineysaa inay soo saarto taleefan casri ah oo cusub, marka loo eego waxqabadka ay soo bandhigtay processor-ka chipset-ka ee uu ku daatay, waxay noqon doontaa terminal dhexdhexaad ah, sida la filayona, waa mid jaban.
Su'aal ahaan, qalabku wuu imaan lahaa Motorola athena waxayna ka soo muuqatay laba madal, kuwaas oo kala ah Google Play Console iyo Geekbench, oo ah bartilmaameedka kiiskan u adeegaya tixraac ahaan si loo xaqiijiyo qaar ka mid ah astaamahiisa iyo qeexitaankiisa farsamo.
Tani waa waxa aan ilaa hadda ka ognahay Motorola Athena
Sida laga soo xigtay waxa lagu daadiyay Google Play Console, Motorola Athena waxay noqon doontaa mobiil suuqyada gaadha oo leh naqshad shaashad caadi ah, taas oo ka koobnaan doonta jajabyo khafiif ah iyo garka xoogaa loogu dhawaaqo, iyo sidoo kale darajo qaab ah hal dhibic oo biyo ah oo yeelan doonta doorka guriyeynta kamaradda iskaa wax u gaarka ah ee terminalku ku faani doono.
Waxa kale ee aan ka soo saari karno liiska ayaa ah taas waxay leedahay xasuus RAM ah 4 GB iyo barnaamijka moobiilka ee loo yaqaan 'Snapdragon SM6115', kaas oo loogu talagalay inuu u dhigmo kan Snapdragon 662, Chipset-ka processor-ka ah ee sideed-koronto ah oo leh ugu badnaan saacad dhan 2.0 GHz.
Dhinaca kale, sii wadida mawduuca shaashadda casriga ah, Motorola Athena waxay imaan doontaa iyadoo la socota HD + guddi dhan 1.600 x 720 xalka pixels, halka cufnaanta pixel ee ay noqon doonto 280, taas oo xoogaa yar. Ka sokow, waxay lahaan doontaa faa'iidooyinka Android 10 sida nidaamka hawlgalka marka hore.
Geekbench kama horimaaneyso xogta Google Play Console wuxuuna xaqiijinayaa in taleefanka uu ku imaan doono 4 GB RAM, Android 10 oo ah nidaamka qalliinka iyo Qualcomm's Snapdragon 662 processor chipset. Intaa waxaa sii dheer, waxay muujineysaa in qaabka tijaabada uu ku guuleystey inuu dhaliyo qiyaastii 1.523 dhibcaha hal-xuddunta ah iyo qiyaastii 5.727 ee imtixaannada isku dhafan.
Waxaan ogaan doonaa astaamaha kale ee mobilka gadaal, iyo sidoo kale faahfaahinta qiimaha iyo helitaanka suuqa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Motorola Athena wuxuu u muuqdaa mid udub dhexaad u ah Snapdragon 662: dhawaan ayuu suuqa soo gali doonaa
[VIDEO] Sida loogu beddelo badhannada kontoroolka fog ee Chromecast Google TV